Waa Maxay Sababta Mulkiilaha Iskuulada Nuuradiin Uu Caqabad Ugu Noqday wasarada waxbarshada Somaliland, warbixin daaha ka fayday | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Waa Maxay Sababta Mulkiilaha Iskuulada Nuuradiin Uu Caqabad Ugu Noqday wasarada waxbarshada...
Waa Maxay Sababta Mulkiilaha Iskuulada Nuuradiin Uu Caqabad Ugu Noqday wasarada waxbarshada Somaliland, warbixin daaha ka fayday
Mulkiilaha dugsiyada Nuuradiin, Mahad Ibraahim Maxamed ayaa Mudooyinkii u dambeeyey laf dhuun gashay ku noqday maamulka Wasaarada Waxbarashada Somaliland, kadib markii uu soo daabacday buugaag uu iskii usoo daabacdo oo uu ku mija-xaabinayo manhajka buugaagta Qaranka Somaliland.
Maamulka Dugsiyada Nuuraddiin, Mahad Ibraahim Maxamed ayaa gabi ahaanba diiday inuu u hogaansamo manhajka cusub ee qaranka JSL kaas oo ka hirgaley dalka oo dhan .
Sidoo kale Maamulka Nuuradin oo sanadihii u dambeeyey caadaystay talaabooyin guracan oo ka dhan ah Wasaarada Waxbarashada Somaliland oo uu ku doonayo inuu isagu wax u yeedhiyo isla markaana aanu u hogaansamin siyaasadaha Wasaarada Waxbarashadu ayaa la sheegay inuu waji-gabax kala kulmay maamulka cusub ee wasaaradda waxbarashada ka dib markii ay go’aan ku gaadheen inay wasaaradda kusoo celiyaan maamuuskii iyo sharaftii ay lahayd wasaaraddu. Dhacdooyinkii uugu dambeeyey ee Mahad kaga horyimid go’aanadda wasaaradda waxaa ka mid ah in dhawaan mar uu Wasiirka Waxbarashadu uu u yeedhay dugsiyada dalka kuna amray in aanu jiri doonin dugsi lagu dhameeyo Saddex sano (three years), sidaa darteedna dugsiyada dalku ay noqdaan Afar sano ayaa maamulka Nuuradin uu si cad uga soo horjeedsaday go’aankaasi, waxaana mudooyinkii u dambeeyey soo noqnoqonayey in ardayda dhigata dugsiyadda Nuradiin ee saddexda sano ah ay si wayn uuga cabanayeen dhamaystir la’aan ka haysata waxbarashada taas oo ay sababtay wakhtiga kooban iyo degdega ay wax ku dhigtaan.
Sooyaalkii Wasaarada Waxbarashadu u soo Martay Diyaarinta Manhajka Iyo Daabacaada Buugaagta
Hadaba muxuu yahay Sooyaalka dheer ee Wasaarada Waxbarashadu usoo martay in qarankani uu helo
Manhaj iyo buugaag daabacan oo ardaydu ay wax ka dhigtaan?
Laga soo bilaabo markii JSL lasoo noqotay madaxbanaanideeda, wasaaraddu waxbarashadu waxay ku foognayd inay seeska u dhigto manhajkii hagi lahaa dhalinyarta dalka ee u heelan inay helaan waxbarasho tayo leh. Muddadaas dheer ee wasaaraddu halganka ku jirtay, manhajka qaranku hadba geed ayuu soo fadhiisanayey waxaanu soo maray marxalado kala duwan. Muddo dheer waxaa manhajka gacanta ku hayey hayaddo shisheeye kuwaas oo waxqababkoodu ku ekaa hadba inta caawimo ay soo dawarsadaan. Daraasad dheer oo la sameeyey ka dib, waxaanu lagu ogaaday in sanadihii 2013, 14, 15 ay istaagtay kaalmadii hayadaha shisheeye ku caawin jireen buugta dugsiyada taas oo dhabarjab ku noqotay geedi-socodkii hanaanka waxbarashada ee dalka oo dhan.
Halkaas markay arrintu maraysay ayey wasaaradda waxbarashadu u baahatay hiil Qaran waxaanay go’aan ku gaadhay inay iskaashi la samaysay muwaadiniinta reer Somaliland ee raba inay maal-galiyaan kaalintaas hayadaha shisheeye baneeyeen si ay hiil uugu noqoto qaranka JSL. Maadaama qaranku markaas la halgamayey gurmadkii cuslaa ee abaaraha, waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo muwaadiniin dalkooda u hiiliya oo maalgeliya mashruuca daabacaada buugta.
Waxaanay noqotay talaabadaasi ay Wasaarada Waxbarashadu ku dhaqaaqday markii kowaad ee Somaliland ay Manhajkeeda u daabacato si madax bannaan, iyo in markii u horreysay ee taariikhda Somaliland la daabaco Manhajka Dusgiga Sare ee Somaliland tan iyo intii ay Somaliland xornimada la soo noqotay sanadkii 1991kii. Waxaa xusid mudan in 106 aqoon-yahan oo ka kala yimid gobolada dalka oo dhan ay muddo 120 casho ah u fadhiyeen xarunta manaahijta WW&S diyaarinta iyo dib-u-eeginta buugta manhajka qaranka.
Hagardaamooyinka Maamulka Dugsiga Nuuradiin Ku Hayo Meelmarinta Manhajka.
Dugsiga Nuuradiin iyo Maamuulkiisa ayaa tan iyo intii Wasaaradu ay u hawlgashay helida Manhajkan iyo buugaagtan wuxu isku dayey sidii uu jalaafooyin ugu dhigi lahaa oo uu meesha uga saari lahaa manjahakan lagu midaynayo dugsiyada dalka Jamhuuriyada Somaliland, waxaana u qaadan-waa ku noqotay in dugsiyadii dalku (dowli iyo gaarba) heleen manhaj midaysan oo isasoo gaadhsiiyey dugsiyadii dalka.
Dugsiga Nuuradiin oo ah ka kaliya ee aan u hogaansanayn Awaamiirta Wasaarada Waxbarashada iyo in ardaydiisa wax looga dhigo buugaagtaas qaranku leeyahay, kaas oo taa badalkeedana ka doorbiday inuu soo daabacdo Manhaj iyo buugaag uu maydhaamay oo u gaar ah dugsiyada Nuuradiin, kuwaas oo uu waalidiinta Ardayda ku qanciyey inay ka miisaan badan yihiin kuwiisu kuwa Manhajka ee Qaranka Somaliland loo soo daabacay.
Maamulka Dugsiga Nuuradiin, Mahad Ibraahim Maxamed oo mudooyinkii u dambeeyey aad looga dayrinayey habdhaqanada foosha xun ee ka dhanka ah Macalimiinta iyo Ardayda dugsiyadaasi oo qaar badan ay Maxkamado isla galeen, ayaa waxa uu ardayda ku sanduleeyaa in ay jumladd ku qaataan buugaagta isagoo qaab ganacsi ka dayaya Buugaagta iyo Manhajka uu soo daabacday ee Wasaarada Waxbarashada uu ka soo dheegtay.
Maamulka Dugsiyada Noradin waxa uu ku amreen ardayda inay buuggiiba ku gataan qiime dhan $3.6, taasina waxa ay wadarta qiimaha ka dhigaysay $36 doollar, halka buugaagta rasmiga ah Wasaaradda Waxbarashada lagu sargooyey$1.5 buugiiba., waxaana la ogaaday in maamulka Dugiysada Noradin uu ardayda ka jeexjeexay buugaagta wasaaradda waxbarashada. Maamulka Nuuraddiin waxay ka xumaadeen inay sinnaadaan dhammaan ardayda Somaliland, iyaga oo maaganaa inay minjaxaabiyaan dugsiyadda dowliga ah. Sidaas awgeed ayay ugu indha-adaygeen in ay bogdooxaan Manhajka Somaliland.
Maamulka Dugsiyada Nuuraddiin ayaa la ogyahay inuu ka dhago adaygay Amaro ay Wasaarada Waxbarashada Somaliland u qortay oo dhigaysay: 1. In Maamulka Dugsiyada Nuuraddiin u hogaansamo manhajka iyo buugta cusub ee ardayda loo diyaariyey 2. In ay joojiyaan dhiigmiirashada ay ku hayaan ardayda iyo waalidka. La-xisaabtankaasi waxa uu laf dhuun gashay ku noqday Maamulka Dugsiyada Nuuraddiin, sidaas awgeed waxa ay bilaabeen in ay dacaayado, been-abuur iyo sumcad-dil ku bilaabaan buugaagta Wasaarada Waxbarashadu soo daabacday.
Marka laga yimaaddo tallaabada ay qaadday wasaaradda waxbarashadu, gabbood-falka badheedhka ah ee Nuuraddiin waxa uu sababi karaa in dacwad lagu soo oogo, isla markaana la mariyo sharciga dalka uga yaalla ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha ee qoraalka buugta wasaaradda waxbarashada.
Waxa sidoo kale oo uu maamulka dugsiyadda Nuradin saluug iyo sas ka qaadeen Tayaynta Dugsiyada Dawliga ah ee uu ballan-qaaday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyaga oo rabay inaanay dugsiyadda dowladu madax lasoo kicin, taas bedelkeedana iyagu kor u socdaan si ay u hantaan macalimiinta tayada leh ee dalka jooga. Nuradin wuxuu isticmaalay dhuumasho dhabarku muuqdo. Faafinta Wararkan xaqiiqada ka fog waxa u xilsaarnaa Garyaqaan Xuseen Fadal oo sidoo kale ah la-taliyaha sharciga ee Dugsiyada Nuuraddiin isla markaana ku iibsadey mihnadiisii sharci-yaqaanimo shilimaad uu ka qaatey mulkiilaha dugsiyada Nuradin. Waxaa kale oo daacayado iyo been-abuur kula kacay wasaaradda af-miishaaro calooshooda u shaqaystayaal ah oo loo soo adeegsadey minjo-xaabinta manhajka qaranka si dalku fowda dhinaca manhajka ah u galo.
Ugu dambeyn, Mahad Nuradin hagardaamo iyo farro-gelin badan ayuu muddo dheer ku hayey wasaaradda waxbarashada, wuxuu faraha kula jiray imtixaanaadka qaranka isaga oo macalimiinta imtixaanka diyaarisa shaqo ka siiya dugsiyadiisa si ardaydiisu kaalmaha hore u galaan; wuxuu faraha kala bixi waayey manhajka qaranka isaga oo sawirtay buugta qaranku lahaa magaciisana ku qortay; wuxuu dhalan-rogay muddadii dugsiyada sare isaga oo dalka ka hirgeliyey dugsiyada sare ee saddexda sano ah; sidaas darteed dowlada Somaliland waa inay dalka ka qabataa kaligii noolaha sidan u dhaqmaya. Wasaaradda waxbarashadu iyada ayaa Masuul ka ah dugsiyada dalka oo dhan, kuwa dowlada iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Sidoo kale wasaaraddu uuma xilsaarna dugsiyada ku yaala magaalooyinka waaweyn oo kaliya, se waxay Masuul ka tahay ardayga wax ku barta miyiga fog, tuulooyinka iyo guud ahaan dacalada dalka. sidaas darteed manhajka iyo buugta qaranku samaystay waxay ka turjumaan baahida aqooneed ee ardayda dalka oo dhan, waxaana lagama maarmaan ah inay wasaaraddu daba-gal ku samayso in manhaj midaysan ka hirgalo dalka oo dhan arday kastana helo buug tayo meel kasta ha joogo ee, cidii ka hor-timaadana sharciga la horgeeyo si dalka looga badbaadiyo kala daadsanaan manhajka ku timaada iyo in ardayda loo dhigo aqoon aan lagu jaangoynin manhajka dalka JSL. Waxaa kale oo wasaaradda la gudboon inay talaabo ka qaado dugsiga kaliya ee ka horyimid guulaha wasaaraddu ka gaadhay dhinaca manhajka iyo buugta.
Previous articleDaawo, Masuuliyiinta Degmada iyo Gobolka Oo Si Kadisa u Kormeeray xarunta kaluumaysiga
Next articleJasiirada Qashinka Qubka maraykanka oo la Ogaaday in Aay Sadex Jeer Ka wayntahay dalka faransiska,